प्रतिपक्षले बहिस्कार गरेपनि प्रदेश सभाद्वारा नाम र राजधानीको प्रस्ताव स्वीकृत ! - Everest Dainik - News from Nepal
प्रतिपक्षले बहिस्कार गरेपनि प्रदेश सभाद्वारा नाम र राजधानीको प्रस्ताव स्वीकृत !
कैलाली,असाेज १२ ।
यतिबेला प्रदेश ७ काे राजधानी र नामाकरणलार्इ लिएर प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म चर्काे बहस सुरु भएकाे छ । प्रतिपक्ष पक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदले सदन बहिस्कार गरेपनि प्रदेश सभाको बहुमत बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका १२ जना र राजपाका २ जना गरी १४ जना प्रदेश सभा बहिष्कार गरेका थिए । विपक्षीले राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयलाई लिएर शुक्रबारको अघिल्लो बैठक अवरोध गरेको थियो ।
प्रदेश सभामुखले केही समय बैठक स्थगित गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गरेका थिए । तर, सहमति नबनेपछि दिउँसो साढे २ बजे प्रदेशसभा बैठक सुरु गरिएको थियो । बैठक प्रारम्भ हुनासाथ विपक्षी सांसदहरु आ-आफ्ना सिटबाट उठेर बैठक अवरुद्धको प्रयास गरेका थिए ।
सभामुखले पटकपटक बस्न आग्रह गर्दा पनि विपक्षी सांसद् बस्न मानेनन् । विपक्षको अवरोधकै बिच सभामुखले बैठकका कामकारबाही अगाडि बढाए । त्यसपछि उनीहरुले बैठक बहिष्कार गर्दै हल छाडेका थिए । प्रतिपक्षको अवरोध भएपनि सत्तापक्षका सांसदहरुको उपस्थितिमा प्रस्ताव पास भएको हो ।नाममा भन्दा पनि राजधानीको विषयमा अहिले पनि निकै बहस र चर्चा भइरहेको छ ।
ट्याग्स: Provience 7